နောက်ဆုံးတော့! ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် Opera တွင် Chrome extension များထည့်သွင်းနိုင်သည် Gadget သတင်း
နှစ်တွေတစ်လျှောက်မှာ၊ Chrome ကို ဂူဂဲလ်သည်လူအများအပြား၏စက်ပစ္စည်းများနှင့်ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်နေရာတစ်ခုရရှိထားသည် အများဆုံးအသုံးပြု web browser များ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း။ အကြောင်းရင်းများမှာအသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်း၊ မြန်နှုန်းနှင့်အခြားသောအချက်များဖြစ်သည် တိုးချဲ့မှု၏ကြီးမားသောအရေအတွက်က ကျွန်တော်တို့ Chrome Web Store မှာ download လုပ်နိုင်ပါပြီ။
Chrome ရှိတိုးချဲ့မှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘရောက်ဇာကိုနေ့စဉ်သုံးပြီးအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည် (အကယ်၍ ၎င်းတို့ကိုမည်သို့ download ဆွဲရမည်ကိုမသိသေးလျှင်၊ ဒီမှာငါတို့ပြောမယ်) ။ ဤအကြောင်းကြောင့်လူအများအပြားတို့သည်ဥပမာအားဖြင့် Opera သို့ browser များပြောင်းရန်တွန့်ဆုတ်နေကြသည်။ သူတို့အားအခွင့်အရေး, ဖြတ်လမ်းများနှင့်အဆောက်အ ဦ များအားလုံးကိုဆုံးရှုံးခြင်းသည်အရသာရှိသောဟင်းတစ်မျိုးမဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့တွင်သတင်းကောင်းရှိသည်။ အော်ပရာကကြေညာခဲ့သည်ဒီနေ့ကစပြီးသင်လုပ်နိုင်တယ် သင်၏ဘရောင်ဇာတွင် Chrome extension များထည့်သွင်းပါ။ ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှင်းပြတယ်။သူတို့တရားဝင်အတွက်ထုတ်ဝေခဲ့ကြသည်အဖြစ် အော်ပရာဘလော့ဂ်အောက်ပါအဆင့်များသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ Install လုပ်ရုံပဲ ဇာတ်ကား အော်ပရာ beta ကို 55 ဒီ link ကနေ နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းထွက်သယ်ဆောင်နိုင်မှစာသားရဲ့အဆုံးမှာသင့်ရဲ့ operating system အတွက်လိုအပ်သောဗားရှင်းရွေးချယ်ခြင်း။ ဒါကိုစိတ်ထဲမှတ်ထားရမယ် beta ကိုဗားရှင်းနေ့စဉ်ဘရောင်ဇာမှသင်မျှော်လင့်ထားသည့်တည်ငြိမ်မှုအားလုံးကိုပေးကောင်းပေးနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဖြစ်နိုင်ချေအမှားအယွင်းများနှင့်အမှားများကိုပြင်ဆင်လိမ့်မည် အနာဂတ်ဗားရှင်း၌တည်၏။
ကျနော်တို့ရုံရန်ရှိသည် ကိုရယူပါ Chrome Web Store မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာမှ Opera beta ကိုထည့်သွင်းပြီးနောက်မှ နဖူးစည်းစာတမ်း ထိပ်မှာလျှင်အံ့သြ ကျွန်တော် extensions တွေကို install ချင်တယ် Google စတိုးကနေ။ ကျနော်တို့ရှေ့ဆက်သွားပေးပြီးတာနဲ့ငါတို့လုပ်နိုင်ပါတယ် ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ extension တစ်ခုစီကို install လုပ်ပါ Google Chrome မှာလိုပဲ။
သင်မြင်သည့်အတိုင်း၎င်းသည်အလွန်လွယ်ကူသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်သည် ၎င်းသည် Beta ကိုသာတပ်ဆင်ထားသည် အော်ပရာအော်ပရေတာ၏အချိန်တိုအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်လူတိုင်းခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသောအခါနှင့်များသောအားဖြင့်သူတို့၏ browser ကို Opera သို့ပြောင်းလဲသောအခါများစွာသောသူတို့၏သံသယများကိုဖယ်ရှားပေးမည့်ပြီးပြည့်စုံသောပြီးပြည့်စုံသော web browser အတွက်အလွန်ကောင်းသောဖြည့်စွက်မှုတစ်ခုမှာယုံမှားဖွယ်မရှိချေ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » နောက်ဆုံးတော့! ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် Opera တွင် Chrome extensions များကို install လုပ်နိုင်ပြီ